ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦး အကြောင်းပြောပြမယ်
အခု အငြိမ်းစား အမေရိကန်ရေတပ် ဗိုလ်မှုးကြီးဘ၀နဲ့ ဘယ်မှာ နေတယ်ထင်သလဲ ။ ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်း ရန်ကုန်လဲ သူမရွေးခဲ့ ၊ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း နေပြည်တော်လဲ သူခြေမချခဲ့ ၊ မြန်မာတို့ရဲ့အစ မဟာပုဂံက ရွာလေးတရွာမှာ သူ့အဖေစကားအတိုင်း ရိုးသားစွာ ခြံစိုက်စားနေလေရဲ့ ။ သူကကော နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားလို့လား ??? သူကကော ပညာမတတ်လို့လား ???
သမိုင်းဆိုတာ သက္ကရာဇ် မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ရဲဝံ့သူတို့ဆီက သက်သေတည်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ကို သိထားစေချင်တာတစ်ခုက နတ်မောက်သား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမိုင်း မရိုင်းရလေအောင် သားကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးဟာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ဘဝကို ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ ။
​မောင်မောင် တစ်ယောက် တောထဲမှာလမ်းပျောက်နေတုံး အိမ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့လို့ အကူအညီတောင်းဖို့ သွားလိုက် တယ်။ အိမ်တံခါးကိုခေါက်လိုက်တော့ တရုတ်အဖိုးကြီးတစ်ယောက် လာဖွင့်ပေးတယ်။ “အဖိုးခင်ဗျာ၊ ကျနော်လမ်းပျောက်လာလို့ ဒီမှာ တစ်ညလောက် တည်းခိုခွင့်ပြုပါ” “ရတယ်၊ စည်းကမ်းတစ်ခုတော့လိုက်နာရမယ်၊ င့ါသမီးကိုလက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့ ရဘူး၊ ဖောက်ဖျက်ရင် ‘တရုတ်နှိပ်စက်နည်း ၃ နည်း’ နဲ့ အပြစ်ပေးခံရမယ်” “ဟုတ်ကဲ့”…ဆိုပြီး ကောင်လေးကစဉ်း စားတ ယ်၊ ‘သူတောင် ဒီလောက်အိုနေမှတော့ သူ့သမီးလည်း တော်တော်အိုနေရောပေ့ါ၊ ဘာမလိုက်နာနိုင်စရာရှိလဲ’ ဒီလိုနဲ့ ညစာစားချိန်ရောက်တော့ အဖိုးကြီးရဲ့သမီးလည်း အတူတူဝင်လာစားတယ်၊ ကောင်မလေးက သူထင်သလိုမ ဟု တ်ဘဲ တော်တော်လေးငယ်ရွယ်ပြီး ပြောစရာမရှိအောင် ချောမောလှပလွန်းနေတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ သိသာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖိုးကြီးက သတိပေးထားတော့ သူက မသိချ င်ယောင်ဆောင်နေရတာပေ့ါ။ ညအိပ်တော့ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တာနဲ့ ကောင်မလေးအခန်းကို ကူးသွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဖိုးကြီးမကြားအောင် တိ တ်တဆိတ်ချစ်စခန်းထကြတာပေ့ါ။ မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ သူ့အခန်းကိုပြန်လာပြီး မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ သူအိပ်ရာကနိုးလာတော့ ပထမ…